पाँचऔंलेमा हुन्छन् यस्ता औषधीय गुण (प्रयोग गर्ने तरिका) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/पाँचऔंलेमा हुन्छन् यस्ता औषधीय गुण (प्रयोग गर्ने तरिका)
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने पाँचऔंलेबारे धरैलाई थाहा नहुन सक्छ । पाँचऔंलेमा धेरै किसिमका औषधीय गुणहरु हुन्छन् ! नेपाली नाम पाँचऔंले भए पनि स्थानीय भाषामा यसलाई हत्ताजडी, पाँच पाते लगायतका नामले समेत चिनिन्छ । आयुर्वेदमा यसलाई निकै महत्वका साथ लिइन्छ ।
२ हजार ५ सय मिटको उचाइदेखि ५ हजार मिटरसम्मको उचाइमा पाइने यस वनस्पतिको एउटा मात्र डाँठ हुन्छ भने यसको जरामा गाना फल्दछ । यसको गाना पन्जा जस्तो आकारको पाँचवटा भागमा बाँडिएको हुन्छ। यो वनस्पतिको फूल गुलाफी तथा प्याजी रंगको हुन्छ । विभिन्न प्रकारका रोगहरु निको पार्ने भएकाले आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ ! यो वनस्पतिको गानो औषधिका रुपमा प्रयोगमा आउँछ ।
पाँचऔंलेको प्रयोग गर्ने तरिका :: पाँचऔंलेको जरालाई पिसेर लेप बनाइ लगाउन सकिन्छ । यसले काटेको, पोलेको घाउ चाडै निको हुन्छ । काटेको ठाउँमा रगत बेगेको छ भने यसको लेप लगाउँदा रगत बग्न बन्द हुन्छ ।
अन्य औषधीय गुण>>>>
पिसाव सम्बन्धी समस्या निको पार्न
यौन शक्ति वा उत्तेजना बढाउन
छालालाई मुलायम बनाउन
शरीर चिलाउने रोक्न
शुक्राणुको संख्या बढाउन